Ungawavumelanisa Kanjani Amakhalenda ama-Google amabili | Martech Zone
Ngokutholwa kwe-ejensi yami futhi manje ngisebenza njengozakwethu kokusha kwami Umlingani weSalesforce, Nginenkinga lapho ngisebenzisa khona ezimbili G Suite akhawunti futhi manje unamakhalenda ama-2 okuphatha. I-akhawunti yami yakudala ye-ejensi isasebenza ukuyisebenzisela ukushicilela kwami ​​nokukhuluma - futhi i-akhawunti entsha eye- Highbridge.
Ngenkathi ngikwazi ukwabelana futhi ngibone ikhalenda ngalinye kwelinye, ngidinga futhi ukukhombisa izikhathi ezivela kwelinye ikhalenda kwelinye njengematasa. Ngifunile noma yiluphi uhlobo lwesixazululo… futhi ukuphela kwendlela ebengingakwenza ngayo ukumema enye i-akhawunti emcimbini ngamunye, omuhle kabi futhi ongaholela ekudidekeni namakhasimende.
Okubaluleke nakakhulu ukuthi nginezinhlelo zokuzihlela zodwa zamakhalenda ngamunye. Lokhu kuholele emihlanganweni eminingi ehlelelwe ukungqubuzana obekufanele ngiyishintshe. Kuyacasula kancane. Ngifisa lokho G Suite unikeze amandla okubhalisela elinye ikhalenda futhi wakwenza kwaba okuzenzakalelayo njenge- umatasa ekhalendeni lokuqala.
Ukusesha kwami ​​kube nomphumela wesixazululo esimnandi, Amakhalenda we-SyncThem. Ngeplatifomu, ngikwazile ukungeza ukuvumelanisa okubili… kusuka ku-akhawunti ngayinye kuya kwenye.
Kungani Vumelanisa Amakhalenda Akho?
Kungaba namacala amaningi okusetshenziswa kwalokhu kusebenza. Ungahle ufune ukuvimba isikhathi kukhalenda lakho lomsebenzi ngokususelwa kukhalenda lakho langasese / lomuntu siqu. Ungahle uthande ukukopisha yonke imicimbi kusuka kukhalenda leqembu uye kowakho uqobo. Noma mhlawumbe usebenza ngokuzimela namakhasimende amaningi ahlukene futhi ufuna ngandlela-thile ukuhlela umsebenzi wakho.
I-akhawunti ikuvumela ukuthi ubhalise ngekhalenda eliyinhloko bese uvumelanisa kuze kube ngamakhalenda ama-5. Okungcono kakhulu, ungenza ngezifiso imininingwane yekhalenda, kufaka phakathi:
Isikhumbuzi - okuzenzakalelayo kuyinto kusulwe ngoba lokho kungaholela ekubeni womabili amakhalenda akuthumele isikhumbuzi.
Color - Iusizo ikakhulukazi, ngingathola ukufakwa kwekhalenda ngalinye kukhonjwe ngombala othile.
Uhlelo lokusebenza lwewebhu oluncane futhi alubizi ngenkontileka yonyaka. Nginesiqiniseko sokuthi izongisindisa ngaphezu kwezindleko zayo ngokuhamba kwesikhathi.
Qala Isivivinyo Sakho Samahhala Sezinsuku eziyi-14
Ukuzikhulula: Ngingumxhumanisi we- Amakhalenda we-SyncThem
Tags: G Suiteikhalenda le-googlegsuiteindlelaUkukhiqizaukuhlelaukuvumelanisavumelanisaamakhalenda